Kulankii Barlamaanka oo maanta ku soo dhamaaday Buuq iyo Khilaaf ay sameyeen Xildhibaanada qaar – Walaal24 Newss
Kulankii Barlamaanka oo maanta ku soo dhamaaday Buuq iyo Khilaaf ay sameyeen Xildhibaanada qaar
April 6, 2019	0	By walaal24
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa Goordhow ku dhawaaqay in uu xiranyahay kulankii Maanta ee Golaha Shacabka, hareeyay Buuq iyo Khilaaf Xildhibaanada qaar ay ku ka ceen.
Sababta uu kulanka u baaqday ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay khilaaf ka dhashay Codkii loo qaaday warbaahinta iney banaan joog ka ahadaan, isla markaana xildhibaanada ay laba garab kala noqdeen.
Intaa ka dib waxaa loo qaaday Cod, 104 Xildhibaan ayaa u codeysay in warbaahinta laga saaro kulankii Maanta ee looga hadlaayay xaalada amniga ee dalka, waxaana diiday 42 xildhibaan oo kaliya, sidaasina uu khilaaf xoogan ku dhashay.
Sidoo kale waxaa ka aamusay codeyntaasi 20 Xildhibaan, sida uu natiijada ku dhawaaqay Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Intaasi kadib waxaa buuq iyo sawaxan uu hareeyay hoolka Baarlamaanka, iyadoona uu kulanku si deg deg ah u soo xiray Guddoomiye Mursal.
Wasiiradda amniga iyo Gaashaandhiga ayaa ku sugnaa hoolka Xarunta Golaha Shacabka iyo Taliyaasha Ciidamada Xoogga, Booliiska iyo Asluubta.
Kulankan ayaa la filayay in su’aalo lagu waydiiyo mas’uuliyiinta hay’adaha amniga dowladda Soomaaliya, Ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa ka doodista amniga Qaranka, hayeeshee waa uu baaqaday.
Ciidamada Amniga oo gacanta ku dhigay Hawlwadeen u qaabilsan ku xirida Gawaarida Qaraxyada
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta ansixiyay hindise sharciyeedka dhismaha Hay’adda dadka Naafada ah
Maamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay tirakoobka shaqaalaha Dawladda Hoose ee Gobolka Banaadir
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo Xukun ku ridday labo eedeysane oo ka tirsanaa Daacish
Shir u dhaxeeya Soomaaliya iyo Beesha Caalamka oo looga wadahadlayo taageeridda Istiraatiijiyadda Qaranka
Wasiirka Amniga Koofur Galbeed iyo Gudomiyaha G.Sh.Hoose oo kormeer ay ku tageen degaanka Bariirre
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo xiriirka laba geesoodka kala hadlay dhiggiisa Dalka Masar
Agasimaha hay’ada socdaalka Soomaaliya oo Safar shaqo ku jooga Dalka Norway kulan la qaatay madaxda hay’ada socdaalka
Haweeney loo magacabay Wasiirad ka dibna is casishay markii la ogaaday Walaalked uu ahaa Daacish
Daawo: Mas’uuliyiin ka tirsan Kastamka Cansuuraha Dekada Muqdisho oo Maxkamad la soo taagay
Daawo: Gudoomiye Enj. Yariisow oo kulan dhaxmaray Ku xigenka wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midobay u qabilsan dhanka Bini-aadamada
Daawo: Xildhibaano dood kulul ka keenay mooshinka laga keenay Gudoomiye Jawaari goobtana ay ku wehliyaan martisharaf
Daawo: Ra’iisal wasare Kheyre “Hadii aad sugaysaan in uu idiin yimaado ajnabi, idiin dhiso garoonkaan waa in aad iska ilaawdaan, waa in aad is abaabushaan, xaaqataan, dhissataan garoonkiinna si uu u shaqeeyo”